Gossip – NOe
မနက်က လဝကရုံးသွားတော့ ဆိုက်ကားစီးဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဆိုက်ကားဆရာနဲ့ စကားစမြည်ပြောဖြစ်တော့ ဆိုက်ကားမှာတပ်ထားတဲ့ ပါတီတစ်ခုရဲ့အလံအကြောင်းစကားရောက်သွားရော။ဒီအလံရဲ့ပါတီကို သူဘယ်လောက် ယုံကြည်ကြောင်း ၊ ထောက်ခံကြောင်းပြောနေတာနဲ့ မိမိက “ဒီအလံကဘယ်လောက်ပေးရလဲ?” လို့မေးတော့ “ခရီးသည်တစ်ယောက်လက်ဆောင်ပေးသွားတာပါ” တဲ့။“မဲစာရင်းရောစစ်ပြီးပြီလား?”ဆိုတော့ “သူတို့စစ်ပြီးပြီလေ”တဲ့ ။“ဘယ်သူတို့လဲ?” လို့ထပ်မေးတော့ “အစိုးရလေ။Facebook မှာလည်းကြေညာတယ်။” တဲ့။အခြေအနေမဟန်တာနဲ့မဲစာရင်းဆိုတာ ရပ်ကွက်ရုံးမှာ ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားစစ်ရတာဖြစ်ကြောင်း ၊မဲစာရင်းမှာကိုယ့်နာမည်မပါရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘယ်ပါတီကိုမှမဲပေးလို့ရမှာမဟုတ်ကြောင်း စဆရက နည်းနည်းလုပ်လိုက်မိတယ်။တလက်စတည်း “အကိုက ရန်ကုန်ကပဲလား?” ဆိုပြီးထပ်မေးမိတော့မှ “ရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘဲ နယ်ကဖြစ်ကြောင်း” ပါသိရ။ရန်ကုန်မှာသန်းခေါင်စာရင်းမရှိဘူး ဆိုပဲ။အိမ်း….အဲဒါတကယ့်မြေပြင်အနေအထားပဲ။ရွေးကောက်ပွဲရက်ကြေညာပြီးကတည်းက လမ်းကြုံသမျှ မိမိစကားပြောကြည့်တဲ့ ဆိုက်ကားဆရာအစ ၊ ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုးလမ်းလျှောက် စျေးသည်အလယ် ၊ အိမ်မှာ မော်တာလာပြင်တဲ့သူအဆုံး အခြေခံလူတန်းစား ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရဲ့အနေအထားဟာ ဒီအတိုင်းချည်းပဲမို့ မိမိအတွက်တော့ သိပ်မထူးဆန်းလှ။ဒီလို အူလည်လည်ဖြစ်နေတဲ့အထဲ မိမိမိတ်ဆွေအချို့တောင်ပါနေသေးလို့ မိမိတတ်သလောက်သိသလောက် ရှင်းပြပေးဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာက တစ်ချို့ကိစ္စတွေက Facebook မှာ Boost လုပ်ရုံ ၊ TikTok မှာ Challenge လုပ်ရုံ ၊ရပ်ကွက်ထဲမှာ လော်နဲ့လှည့်အော်နေရုံ ၊ ရပ်ကွက်ရုံးကနေဘစပီကာနဲ့ သီချင်းအကျယ်ကြီးထိုင်ဖွင့်နေရုံ နဲ့ တကယ်အလုပ်မဖြစ်ကြောင်း …။တစ်ခါတစ်လေ လှည်းနေလှေအောင်းမြင်းစောင်းမကျန် စနည်းနာရင်ပိုအဆင်ပြေကြောင်း …။ တလက်စတည်းပြောရရင် တစ်ချို့ကိစ္စတွေကယူနီဖောင်းတကားကားနဲ့ လူစုလူဝေးလုပ်တာထက်စာရင် ခရီးသွားဟန်လွှဲပုံစံက အလုပ်ပိုဖြစ်ကြောင်းပါ လက်တို့လို
မတွေ့တာအတော်ကြာပြီဖြစ်သော အသိရခိုင်အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်နှင့်တည့်တည့်တိုးသည်။“ဟဲ့ နိုးနိုးရယ် ဝပြဲနေတာပဲ” ဆိုတာနဲ့ သူ့ဖက်မှစတင်နှုတ်ဆက်စကားဆိုတယ်။မိမိ ဘာမှပြန်မပြောဖြစ်။(စိတ်ထဲမှာတော့ ဆဲချင်တာမှအရမ်းပဲ။)“အိမ်ထောင်တွေ ဘာတွေ ကျပြီလား” ဆက်မေးလို့“ဟုတ်ကဲ့” ဆိုပြီးဖြေလိုက်တယ်။“ငါ့ဘာလို့မဖိတ်တာလဲ?” တဲ့။လခွမ်း။“အန်တီမို့ တမင်မဖိတ်တာ” လို့ဖြေရင်လည်း “နိူးနိူးကရိုင်းတယ်” ဖြစ်မှာမို့ ဘာမှမပြောဘဲရီနေလိုက်တယ်။အဲ့လောက်နဲ့ရပ်မသွားသေးဘူး။“ဟဲ့ ကောင်လေးကဗမာလား? ရခိုင်လား?” တဲ့။“ဗမာပါ” ဆိုတော့ မဲ့ကာရွဲ့ကာနဲ့ “ဘာလို့ ဗမာယူတာလဲ? ကိုယ့်ရခိုင်ချင်းယူတာမဟုတ်ဘူး။….” အစချီပြီးဘာတွေဆက်ပြောမှန်းမသိတော့…..“သွားစရာရှိသေးလို့ နောက်မှတွေ့တာပေါ့” ဆိုပြီး စကားဖြတ်ထွက်လာခဲ့ရတယ်။နို့မို့ရင် ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလေ။Body Shaming လုပ်တတ်တဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားသူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံရခြင်းဟာ မိမိအတွက်တော့ အဆင်မပြေလှဘူး။စောစောစီးစီး အင်မတန်မှစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။မိမိလည်းတမင်တကာကြီးကို ဗမာကိုမှယူပါမယ်ဆိုပြီး ယူခဲ့တာလည်းမဟုတ်။(ရခိုင်ကိုမှရွေးယူရအောင်လည်း ဘယ်ရခိုင်သားကမှလည်း ကိုယ့်လာမကြိုက်ခဲ့။လာကြိုက်တဲ့ရခိုင်ရှိခဲ့ရင်လည်း ကိုယ်ကပြန်ကြိုက်ဦးမှ။ ကိုယ်နဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်ဦးမှ။)ဒါပေမယ့်လည်း ဒါမျိုးတွေအမြဲကြုံ နေရတာပါပဲ။နောက်လည်းကြုံနေရဦးမှာပါပဲ။ဗမာတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျခြင်းကို ရွံစရာ မသတီစရာလို့ ခံယူထားတဲ့ သူတွေအရမ်းများတဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှာ လူလာဖြစ်တာကို။
ရခိုင်အချင်းချင်းတောင် ရခိုင်စကားမပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုဆို နှိမ့်ချချင်ကြသူတွေနဲ့လည်း ကြုံဖူးပါရဲ့။(ပညာတတ်တာ ၊ စိတ်သဘောထားပြည့်ဝတာ ၊ အမြင်ကျယ်တာ ၊ အမျှော်အမြင်ကြီးတာ … စတာတွေ ဘာမှထည့်မတွက်ဘဲ ရခိုင်စကားမပြောတတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ တန်းနှိမ်တာပါနော်)ဒါတောင်မိမိဟာ အရမ်းကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။အဖိုး၊ အဖွား ၊ ကြီးတော်တွေ ၊ ဘကြီးတွေ ၊ ဦးလေးတွေ ၊ အဒေါ်တွေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့အမျိုးအရင်းတွေက ဘာမှမပြောတဲ့အပြင် ကိုယ့်ယောက်ကျားကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လက်ခံကြိုဆိုကြလို့ ။(အဖွားဆို ကထွင်းကို သူ့မြေးအရင်းလိုကိုချစ်တာ။)ပြောချင်တာကမိမိဟာ ရခိုင်မတစ်ယောက်ပါ။ဗမာကိုလင်တော်ထားတဲ့ရခိုင်မတစ်ယောက်ပါ။မိမိ သားသမီးတွေမွေးလာရင် ရခိုင်-ဗမာ ကပြားလေးတွေဖြစ်မှာပါ။ဒါကိုမှ မကျေနပ်ကြလည်း မတတ်နိုင်ဘူး ။
Posted in Gossip, NOeLeaveacomment
ဟိုတစ်လောက facebook ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုထွန်းလင်းကိုမွေးနေ့အမှတ်တရ Video လေးတင်ပေးချင်လို့ဆိုပြီ ပြန်သုံးဖြစ်သွားတာ။
ပေါက်ကရတွေလုပ်ရင်း အနုပညာရှင်ဆိုပြီး မထော်မနန်းတွေ နာမည်တပ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေများလာတော့ သူသူငါငါက Facebook မှာ ပေါက်ကရတွေလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားလာကြသလားလို့။
နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ မယ်မယ်ရရမဟုတ်ဘဲ လူတကာကိုလိုက်ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုဆိုတာ ဘာညာ နဲ့ စဆရက လိုက်လုပ်နေကြသူတွေကလည်းတစ်မျိူး။
Deactivated လုပ်ဖို့ကျပြန်တော့လည်း MeFood Page က ရှိနေပြန်တယ်။
အခုတော့ Phone မှာ Facebook App ကိုဖျက်ထားလိုက်ပြီ။
PC မှာလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမသုံးဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ရတော့မယ်။
ရေးချင်တာတွေရှိရင်လည်း ဒီ Website မှာပဲရေးတင်တော့မယ်။
You Tube မှာလည်း Vlog တွေတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရဦးမယ်။
This afternoon, I attended the “BecomingaTech Entrepreneur ” event as one of the panelists at “Exuberance Panel” and shared about me , my career life and my future dreams .
There were some girls asked me if the organization I’m participating, Geek Girls runs events and activities as commercial , how Geek Girls is using registration fees from members and so on.
I got shock when I heard these questions.
Actually, Geek Girls is neitheraorganization noracommercial business. It’s justaplatform to communicate among women working in Myanmar Tech Industry.
We , all the board members , are running our own businesses and have well enough income from each of them. For me , Geek Girls is just for fun not for fund. And the others are same as me. I make money mainly by running my business and sometimes working as consultant for some people secretly , speaker at some events and trainer at some workshops.
So, except some trainer fees for Geek Girls workshop tours , I haven’t get any penny from it. Sometimes, I have to spend from my pocket.
I didn’t explain the girls in detail as it’s too weird . But I told them that I don’t know where they heard such rumors and to ask the ones how much they spent for Geek Girls.
I hate such Dramasalot. That’s why I quit from Facebook. In Myanmar, Facebook is likeagossip garbage heap and so annoying. People are sharing mostly hate speech ,rumors and gossip mostly there.
They also usually use so rude word shamelessly. I can’t understand such people.
Why they want to creat and share such dramatic rumorsalot? Yes If they don’t like someone, they should just stay away from them or confront with them face to face.
Instead of them , they just do underhand machinations.
And there’s another type of people I can’t understand on Facebook.
That type is people who love to promote themselves with fake things.
For example, although being nothing , they pretend likeasuccessful people. Sometimes, they copy other people ‘s idea without credit and post like their own.
My biggest problem is knowing the truth of whatever they are lying. I want to advise them that if they want to be successful, they should try honestly to be instead of doing such shit things.
But I also understand that’s their rights, they can post anything on their own Facebook wall as they like. That’s why I uninstalled Facebook from my phone as I also have rights to do thus.
Anyway , as I met with many successful and famous CEOs and real (not fake) Entrepreneurs , today has been so meaningful for me.
Thank you so much everyone who made today happened.
Posted in Gossip, PeopleTagged Gosspi, PeopleLeaveacomment